Sethula kini entsha futhi olusha Far Cry Primal Code Generator ....
Kungani uchitha imali yakho uma ungathola Grand Theft Auto V CD Key kule site mahhala! Kule sayithi web ungasebenzisa ...
Legacy YuGiOh we Duelist CD Key Generator
Namuhla sizobe sethula sha YuGiOh Legacy of the Duelist CD Key Generator! I YuGiOh Legacy of the Duelist ...
Metal Gear V Solid The Phantom Pain Free CD Key Generator
Thwebula Metal Gear V Solid The Phantom Pain ukhiye cd generator ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho ....
Outlast 2 Ukuqalisa Code Generator 2017
Outlast 2 Ikhodi kusebenze generator iyithuluzi ukuthi unamandla ukukhiqiza bangempela Steam amakhodi lo mdlalo isiqophi ...
Anthem Download Okugcwele Game [PC]
Anthem thwebula PC ngokugcwele umdlalo kusuka kule sayithi mahhala! If you want to download Anthem video game then our game inst...
Space Onjiniyela CD Key Generator 2016
Sethula kuwe entsha futhi olusha Space Engineers CD Key Generator ....
Ukucabanga ngani umdlalo ukuthenga, Kungaba lula njengoba izinqumo mayelana nokuthi yiziphi movie ukuze ubone ...
Hey, abadlala ingabe athande ukudlala umdlalo zezombusazwe? Namuhla esinakho Realpolitiks CD Key Generator, nale ubani ithuluzi can g ...
Deus Ex: Isintu Ohlukene Free CD Key Generator 2017
Thwebula zakamuva Deus Ex: Isintu Ohlukene umkhiqizo cd generator key futhi zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd ....
Skyhill Khulula Umdlalo CD Key Generator 
Thwebula zakamuva Skyhill umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho ....
Posted in Game Izibuyekezo	2016-11-30
A sports ebusika sekulingisa video game by Ubisoft, embeded ezindaweni ngokungaguquki ukusungulwa kwe-Alps futhi Alaska, ihlukaniswe eziningi emikhakheni evulekile-izwe. Kukhona ungaya snowboarding noma i-snowboarding, ngisho zidinga ukuba isibhakabhaka nge paraglider noma Wingsuit. Gameplay kumane Arcade-like, ngakho kufanele kokubili uhambo ngokushesha futhi afeze amasu omangalisayo. Phakathi umdlalo ividiyo ungakwazi ukuthi sikwenze beat ibutho elikhulu nobunzima ezifana nokulingwa isikhathi noma stunts. Emaweni futhi ubeka gxila element nomphakathi, sibonga ngalo ungakwazi ukuthuthukisa nobunzima akho kakhulu futhi ngeke yini kwabenza ahlinzekwa kwabanye abadlali. Uhlelo ifaniswe amazinga ku-intanethi ngokubika, nakuba ungakwazi zingabahileli lo mncintiswano futhi nje ujabule ngamanoni namathafa usuku lwasebusika olubandayo wayenolaka.
Emaweni kuyinto okunzima nobusika ezemidlalo sekulingisa isiqophi umdlalo, umkhankaso ye-PC / Windows nezinye izinto. It is embeded ezweni opn futhi ligxile kakhulu kwi-elementi nomphakathi. Umdlalo isiqophi esasungulwa kulungiselelwa imisebenzi Ubisoft Annecy.The isiqophi umdlalo sika izingxenye ezinkulu Alps futhi Alaska, ihlukaniswe imikhakha eminingi omkhulu. Kukhona ungaya snowboarding noma i-snowboarding, noma mhlawumbe zidinga ukuba isibhakabhaka nge paraglider noma Wingsuit.
Kuyo yonke le Gameplay, ungathatha futhi ukwanelisa nabanye abadlali iqhaza izithiyo zawo ngokwezifiso okudalwe (e.g. izilingo isikhathi noma stunts). Isici esiyinhloko emaweni iyona umncintiswano phakathi abadlali, kuhlanganise amazinga inthanethi, nokuthatha iqhaza izithiyo ukusakaza wonke emhlabeni umdlalo wevidiyo. Ungakwazi futhi ingore izinhloso kanye nabanye abadlali futhi nje uyijabulele namathafa wasebusika.
Ziningi izinto ezikhethekile ngamunye 4 eyala ahlinzekwa, ezifana ski slalom endaweni Wingsuit noma indiza ihlathi njengoba eduze emthambekeni entabeni sika ngangokunokwenzeka. I abadlala nabo bakha emacembu kanye bazijabulise ndawonye, ngisho nalapho zonke ukukhetha umdlalo ezihlukahlukene (ke evumela enifeza Amazing iqembu stunts), kuyilapho abathanda uhambo Ungabheka eziningi ezindaweni ezifihlakele.
Emaweni PC ushukumisa eternalizing ozenzile, ngakho kokubili eshaya izithiyo, nakho kusishukumisele nabanye abadlali ukuzama afanayo noma eshaya nathi, futhi ngokuthatha izithombe noma replays tape-ukuqopha, okungase ngokushesha wabe zokuxhumana. Umdlalo isiqophi ngisho kuhlanganisa ngokunyakaza isithombe umhleli nge kunalokho lokunengi izindlela.
One comment to emaweni
2016-12-01 at 1:12 pm
I uqedela sipho esheshayo bese ithuluzi yami, awesome, working like a charm, thanks